Tsy manatona hopitaly ny marary : mitombo 10% isan-taona ny tranga homamiadana vaovao · Aponga
Tsy manatona hopitaly ny marary : mitombo 10% isan-taona ny tranga homamiadana vaovao
Mitombo 10% isan-taona ny tahan’ny olona voan’ny homamiadana eto Madagasikara. Ny taona 2008, manodidina ny ny 1 650 ny tranga vaovao noraisina an-tanana teny amin’ny toeram-pitsaboana misahana izany. Tsy ampy hitarafana ny antontanisa marina izany satria 30% amin’ny tranga ihany no avy amin’ny faritra hafa fa ny ambiny, avy eto Antananarivo avokoa, araka ny fanazavana. Ny olana, tsy manatona toeram-pitsaboana akory ny ankamaroan’ny olona voan’ny aretina homamiadana na koa tsy ampy vola hikarakarana ny marary. Tombanan’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) sy ny foibe iraisam-pirenena mikaroka momba ny homamiadana (CIRC) fa 19 484 ny tranga homamiadana vaovao ny taona 2015.
Mampihena ny tranga vaovao ny tsy fifohana sigara, tsy fisotroana zava-pisotro misy alikaola, fampiasam-batana matetika ary ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Anisan’ny mampiroborobo koa ny homamiadana ny fahalotoan’ny rivotra iainana eny amin’ny tontolo.
Eo amin’ny fandraisana an-tanana eo amin’ny fitiliana, 120 ny hopitaly ahitana ny foibe fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza eto amintsika. Ny dimy amin’ireo 120 efa manana ny fitaovam-pitiliana na «cryothérapie».
Nambaran’ny tomponandraikitra fa hiasa manomboka amin’ity taona ity ny foibe fanaovana «radiothérapie» ao amin’ny HJRA. Nandray anjara amin’ny fanatanterahana ny hetsika teny amin’ny HJRA ho fanamarihana ny andro iadiana amin’ny homamiadana ny orinasa Star. Nizara rano izy ireo tao anatin’ny fizotry ny fanentanana samihafa.